Nika Samofrakiyskaya - एक परिचित नौलो
यो राम्रो महिला एकदम केहि वर्ष - कहीं 2204 मा। यो मूल अन्य थुप्रै महिलाहरु तुलनामा यो अझै पनि धेरै युवा छ। को ईजियन सागर मा Samothraki को द्वीप, देखि Louvre गर्न निक आइपुग्यो नजिकै आफ्नो स्पष्ट आँखा खडा गर्न 1863 मा उनले फ्रान्स र पुरातत्वविद् अवैतनिक चार्ल्स Shampuazo को उपाध्यक्ष-वाणिज्य दुत को सम्मान थियो जहाँ, (मिथकों को एक, द्वीप Poseidon को निवास थियो) Andrinopolya शहर। साँचो, मुर्ति कुनै टाउको थियो फेला परेन। चाखलाग्दो कुरा, यो seabed वा कसैको संग्रह मा छ?
आविष्कारहरू को इतिहास
खैर, विजय को टुकडे भेला restorers देवी मात्र 1884 मा। मुर्ति को दाहिने 1950 मा मात्र जर्मन archaeologists फेला गरिनेछ। कुनै हतारमा निक Samofrayskaya मानवता अभिवादन गर्न। ला Victoire डे Samothrace को Louvre को सबैभन्दा ठूलो सम्पत्तिहरू को छ। र त्यो बस Daru तल अग्रणी सिढी माथि खडा प्रदर्शन, को खुला पर्खालहरु को पृष्ठभूमिमा, थप साँचो हीरे राम्रो र rimless छन् भन्ने तथ्यलाई जोड गर्न। यो Nika Samofrakiyskaya कस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस्। फोटो, दुर्भाग्यवश, हामीलाई साँचो, लगभग सुनको संगमरमर को रंग थप चिसो पत्थर मा भन्दा एक थोडा tanned छाला जस्तै देखाउन थिएन। तुलना मा, खैरो संगमरमर आधार विदेशी देखिन्छ।
मुर्ति को इतिहास
ग्रीक मूर्ति Pifokrit (सबै अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वास हुनत यो व्याख्या छ) बारे 190 ई.पू. मा सिर्जना गरियो। ई। एक अनाम ग्रीक नौसेना संग्रामहरू जीतेको को सम्मान मा। यो एक समय थियो जब को "प्रतिफलको ग्रीक शहर को स्वतन्त्रता" को बहाने रोमीहरूलाई को Macedonians चाँडै ग्रीस मा सबै नीतिहरू लागि आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव फैलाउन देखि जफत गर्ने। यो पृष्ठभूमिमा विरुद्ध, Samothracian रक मुलुकमा यहाँ मा यो एक हो विजय को प्रतीक। हुनत, फेरि, केही इतिहासकारहरूले मुर्ति विजय 263 ई.पू. मा अलेक्जेन्डर को साम्राज्य को भग्नावशेष मा शासन गर्ने टोलेमीहरूको, एक को Antigonus द्वितीय Gonatas सम्झना गर्न बनाइएको थियो भन्ने विश्वास गर्छन्। ई। र सिरियाली छिटो भन्दा विजय को सम्मान मा "जन्म" थियो देवी रोड्स मा Nika Samofrakiyskaya, संस्करण छ। तर त्यसपछि Samothraki मा उनको उपस्थिति को कथा गाह्रो हुन। यस स्तम्भ तल्ला Rhodhios (रोड्स) मा carved नवीनतम संस्करण को पक्षमा बताइएको छ। मुर्ति अन्तर्गत स्तम्भ एक ग्रीक जहाज लडिरहेका नाक प्रतिनिधित्व गर्दछ, र सायद उहाँले साँच्चै देवी र पवित्र मन्दिरमा Kabirov संग गर्न केही छ।
पुरातत्व र भूगोल बारेमा
त्यतिबेला त्यो फेला परेन गर्दा उत्खनन बाहिर पवित्र मन्दिरमा Kabirov को क्षेत्र मा लगे थिए। यो देवताहरूको, क्लासिकल ग्रीक Pantheon भाग छैन। उल्लिखित देवताहरूका समर्पित Samothracian रहस्य मा, धेरै युनानी को Hellenistic उमेर मा भेला भए। Nika Samofrakiyskaya मुर्ति एक उपहार कबीर रूपमा युनानी द्वारा ल्याइयो। पुरातत्वविद् चार्ल्स Shampuazo लामो पूर्व फ्रान्सेली वाणिज्य दुत भएको र भरोसा र ग्रीक किसान र टर्की अधिकारीहरूले बढाउनका व्यवस्थित छ। मात्र यो युनानी उहाँलाई कहाँ मुर्ति लुकाइएको थियो ठाउँ देखाए, र तुर्क फ्रान्स यसलाई जहाज अनुमति थिए भन्ने तथ्यलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। द्वितीय विश्व युद्ध दौरान, Louvre मा Nika Samofrakiyskaya लिएको र एक मध्ययुगीन महल, Valence, फ्रान्स को दक्षिण-पूर्वी मा लयर स्थित को तहखाने मा लुकेको थियो। महल को एक रोचक विकल्प। हामी उहाँले हामीलाई बारेमा थप हामी उहाँलाई भन्दा थाह मात्र भन्न सक्छौं जो बारेमा ती ऐतिहासिक तथ्याङ्कले, एक - 1803 मा राजकुमार डे Talleyrand द्वारा किनेको थियो।
उनको बारेमा सबै
"एक देश बिना आप्रवासी र मान्छे को सस्तो प्रतीक।" - को "चाप डी ट्रायोम्फे" मा दुष्ट Erich मारिया Remarque विश्वास गर्छ को Nika Samofrakiyskaya कि यो निष्कर्षमा उसलाई नेतृत्व के बुझ्न प्रयास गर्ने? एकै समयमा व्लादिमीर Ilyich लेनिन मा, Louvre गएर, त्यो निक "अचम्मको, गैर-मानव सृष्टिको।" भनिन्छ यो संसारमा विलक्षणता देवी को एक छाया - सबै फरक epithets लागि यी मामलामा सामान्य कुरा छ। Oceanides - कुनै आमा आश्चर्य Styx। नदी एक विजय आमा मृत्युको राज्यको - यो युनानी गर्न एक अप्रत्याशित analogy, ठूलो मिश्रको र भली भांति बंद परम्परा छ। निक कहिलेकाहीं हातमा Hermes रड संग चित्रण गरिएको आश्चर्य।
निक र कला परम्परा
ग्रीक पौराणिक कथाहरु को अनुसार, Nika Samofrakiyskaya - छोरी Oceanides र टाइटेनियम। उनको आंकडा अक्सर को हात मा पनि चित्रण गरिएको छ Zeus को मुर्ति। यो अर्को बिजुली को मास्टर गर्न लगभग मात्र मामला अन्य deity उपस्थितिको छ। आधिकारिक ग्रीक धार्मिक परम्परा को यस विशेष तरिका को मूल foreignness अर्को सङ्केत। तर म त्यो सबै क्लासिक कला शरीरका मासु कसरी आश्चर्य ... यो लगभग सबै पछि स्वर्गदूतहरू र archangels देखिन्छ इटालियन पुनर्जागरण को Nicky संग लिखित थिए। को सकेन इटालियन कलाकार यो वा यस्तै वस्तुहरू हेर्न - अज्ञात छ। तर यो समकालीन कला यंत्रीकृत को प्रशंसक बीच सबैभन्दा ठूलो घृणा हुन्छ। Filippo Tommaso Marinetti 1908 मा प्रकाशित "Futurism को मेनिफेस्टो" घोषणा गरेको छ: "... दुवै एक ठूलो डिब्बा मा चल्छ भनेर एक गर्जन कार इन्जिन - त्यो Samothrace को नाइके को मुर्ति भन्दा बढी सुन्दर छ।" तर, आंकडा Nicky रेडियेटर लगभग सबै लक्जरी मा खडा "रोल्स-Royces।"
कामुक कला को मास्को संग्रहालय को असामान्य पर्यटन
बोलीको संस्कृति के हो? परिभाषा
Splat - टूथपेस्ट: निर्माता, विवरण, दृश्य र समीक्षा
पार्क होटल "Stavropol" 4: * विवरण, फोटो र समीक्षा
गर्भवती महिला को पेट मा दाना
च्याउ julienne - को नुस्खा मूल फ्रान्स ले छ
फ्रांसीसी सॉस: व्यञ्जनहरु। फ्रान्सेली सस र मरिनाडेड
"हरियो वन" (ZELENOGRAD)। सुविधा र निर्दिष्टीकरण
मस्तिष्क कसरी विकास गर्ने?